भारतिय सेनाको दादागिरी : बिच नदिमा पुगेको तुइन का'टेर नेपालीको ह'त्या तर सरकार मौन ! सेयर गर्नुहोला… - खबरदार न्युज
ब्याँस गाउँपालिका २ मालघाटमा महाकाली तर्ने क्रममा एसएसबीले तुईन का’टिदिदा एक जना नेपाली नदीमा बे’पत्ता भएका छन् । सदरमुकाम खलंगा आउने क्रममा माल खानदानका ३५ वर्षीय जयसिह धामी वेप’त्ता भएका हुन् ।
शुक्रबार विहान गाउँबाट दार्चुला सदरमुकाम आउने क्रममा नदीमा तुईन तर्दै थिए । महाकाली तर्ने क्रममा एसएसबीले देखेपछि तुइन का’टिदिएको स्थानीय विक्रसिह धामीले बताउनुभयो । भारततर्फ पुग्ने बेला एसएसबीले एक्कासी तुइन का’टिदियो उहाँले भन्नुभयोे, नदीको बीच भागमा पुग्ने बेला तुइन का’टिएपछि उनी वेप’त्ता भएका हुन् ।
पाँच छ जना स्थानियहरु सामान लिन भारतको बाटो हुदै दार्चुला आइरहेका थियौं धामीले भन्नुभयोे पाच छ जनातुईनबाट भारत तरेका थिए, जयसिह तर्ने बेला एसएसबी पुगेर तुईन का’टिदिए । भारत पांगलमा रहेका एसएसबीले तुईन का’टि दिएका हुन् ।
धामी वेप,त्ता भएपछि अहिले स्थानीय आ’क्रो’शित छन् । म काठमाण्डौ जान आउँदै थिए, विक्रमले भन्नुभयो, हामी नपुग्दै तुइनका’टिदिएपछि उनी वेप’त्ता भए । अहिले खोजी गर्दैछौ ।
नेपालतर्फ सडक नहुँदा ब्यास क्षेत्रका स्थानीयहरु दार्चुला सदरमुकाम खलंगा आउनका लागि भारतको बाटो भएर महाकाली नदीमा तुईन तरेर आउनुपर्ने बाध्यता छ । तुईनबाट खस्दा बेला बेला यस्ता घ’ट’ना हुने गरेका छन् ।
सरकारले तुईनमुक्त कार्यक्रम अन्र्तगत तुईन भएको ठाउँमा पुल बनाउन योजना सञ्चालन गरेको भएपनि पुल निर्माण अलपत्र छ । व्यासका नागरिकहरु खाद्यान्न, औषधी, र आवतजावत यहि तुइनमार्फत आउतजावत गर्दै आएका छन् ।
बेलाबेला एसएसबीले तुइन का’टिदिने गरेको भएपनि स्थानीयले लुकाई छिपीले तुइन लगाउने गरेका छन् । अहिले घ’ट’नास्थलमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी नरेन्द्र चन्दले बताउनुभयो ।
Previous post यो मेरो जिन्दगी हो, यतिसम्म कि म अमेरिकामा सवारी गर्दापनी हेल्मेट लगाउन्न: पारश शाह । विवादपछि पहिलोपटक मुख खोले ।
Next post नयाँ नियम सहित देशैभर फेरि लक डाउन । यस्तो छ नयाँ मापदण्ड – स्कुल, पसल बन्द?
Previous post:यो मेरो जिन्दगी हो, यतिसम्म कि म अमेरिकामा सवारी गर्दापनी हेल्मेट लगाउन्न: पारश शाह । विवादपछि पहिलोपटक मुख खोले ।
Next post:नयाँ नियम सहित देशैभर फेरि लक डाउन । यस्तो छ नयाँ मापदण्ड – स्कुल, पसल बन्द?